Nhau - Stationery Inogadza Vana Party Zvipo
Stationery seti izita rezita rinoreva zvekutengesa zvinogadzirwa zvekumonyesa, zvinosanganisira bepa rakatemwa, mahamvuropu, zvishandiso zvekunyora, rinoenderera fomu fomu, uye zvimwe zvekuhofisi. Uchave mwaka mutsva wechikoro wekuuya kwaGunyana. Wakagadzirira here maseti ezvinyorwa zvevana vako? Iwe uchiri kutsvaga yakasarudzika stationery seti ayo ari kutapira kwevana? Iwe haugone kutarisa kumberi asi edu matsva akakosha - madiki Tiger Sets, iyo isiri chete chipo chakakwana chevana, asi zvakare inokuita kuti ubude pamusika.
Iko kunakirwa kweiyi yakasarudzika stationery seti yevana ndeinotevera:
1. 6pcs zvinyorwa zvakaiswa mupurasitiki yekutakura kesi ne runako
2. Feature neyakajairika dhizaini inodiwa nevana
3. Yemahara yeforoma nekudhinda seta fizi yezviripo zvigadzirwa
4. Yakakwirira mhando, zvese zvinhu hazvina chepfu uye hwema hwemahara
5.Teerera ne EN71, REACH, CPSIA uye ASTM test standard
6. Chipo chakakwana chechikoro, imba, zuva rekuzvarwa, pati kana zvimwe zviitiko
7. Unogona kuva neyako yakagadzirirwa senge chikumbiro chako
8. Tinogona kupa mahara emahara kuti iwe utarise mhando
9. Kwete MOQ nemakwikwi mutengo, inokurumidza kutumira nguva
Ichavewo shanduko huru kukudziridza nyowani yechigadzirwa mutsetse nemaseti ezvinyorwa mukati menguva inopisa yechikoro. Kunze kweiyo iripo dhizaini dhizaini, tsika magadzirirwo anogamuchirwa neushamwari. Iine anopfuura matatu mafekitori & vashandi mazana maviri nemazana mashanu, uye vari ivo vakagamuchirwa Disney, McDonald's, Coca-Cola & NBC Universal mugadziri, Pretty Shiny Zvipo yakazvipira kugadzira matsva ekugadzira zvinhu seti anosanganisira mapenzura, rosi, irabha, unopinza, akasiyana marudzi emapenzura yevana. Kuchengetedza, hunyanzvi, mhando yepamusoro ndizvo zvinangwa zvedu.
Unofanirwa kuve nemimwe mibvunzo nezve vana vanonyora zvipo kana chero chinhu chatinogona kukuitira, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu ku sales@sjjgifts.com.
Post nguva: Aug-11-2021